मारमोर झरना पुग्छ 165 बाहिरको सब भन्दा अग्लो सँग मि3को उचाई मा 85 एम. त्यसैले, युरोपको सबैभन्दा अग्लो मानव निर्मित जलप्रपात भनेको मार्मोर झरना हो. यो उत्साहजनक झरना उम्ब्रीया क्षेत्रको बीचमा अवस्थित छ र यो प्राचीन रोमीहरूले बनाएको हो.
सेतो रंगको चट्टानहरू र बहु-सतहयुक्त झरनाहरू सजिलै रोम टर्मिनीबाट तेर्नी शहरसम्म रेलमा पुग्छन्।. तेर्नीका लागि ट्रेनहरू धेरै नियमित हुन्छन् र ट्रेन हरेक घण्टामा प्रस्थान गर्दछ. जब तपाइँ Terni रेल स्टेशन मा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ बसहरू छन् जुन तपाईंलाई झरनामा लैजान सक्छ. त्यहाँ झरनाहरु को लागी एक प्रवेश शुल्क छ.
तथापि, Trenitalia ट्रेन टिकटको साथ तपाईं छुट पाउनुहुनेछ र यो Marmore झरनाको लागि ट्रेन बाट यात्राको लागि अर्को लाभ हो:)
इटालीमा सब भन्दा चिनिएको र फोटोग्राफ गरिएको झरना डि सथर्निया गाउँको भू-तापीय झरना हो. टस्कनीमा अवस्थित, सटोरनिया तातो स्प्रि the्ग्स सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक हो युरोपमा प्राकृतिक तातो स्प्रि .हरू. यो सानो शहर रोमन समयदेखि नै प्रसिद्ध तातो स्प्रि .हरूको घर छ. तपाईंको टस्कनी छुट्टी शनिबारको तातो झरनाहरूमा एक दिन बिना पूरा हुँदैन. नजिकका अन्य सुन्दर झरनाहरू भ्रमण गरेपछि स्प्रिहरू आराम गर्नका लागि उत्कृष्ट छन्, मिल, र गोरेल्लोको झरना.
गर्मीमा राइन झरनाहरू भ्रमण गर्नु उत्तम हो हिउँ पग्लिएपछि र वरपरका सबै चीजहरू हराभरा छ. राइन झरनाहरू एक हुन् 50 मिनेट ट्रेन सडक ज्यूरिखबाट टाढा छ र त्यहाँ झरनाको दुबै तिर दुई रेल स्टेशनहरू छन्. त्यसैले, यो दुबै परिवार र को लागी आश्चर्यजनक झरनाहरु मा यात्रा गर्न को लागी धेरै सजिलो छ एकल यात्री.
यदि तपाइँ अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ र विशेष गरी राम्रा दृश्यहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ पक्कै टायरोलमा स्टुइबेंफल झरना मन पराउनुहुनेछ. सस्पेंशन ब्रिजहरू र घुमाउरो टावरहरूले यस अद्भुत झरनालाई पैदल यात्रामा रमाईलो पार्छन्. टायरोलको सब भन्दा अग्लो र सबैभन्दा ठूलो झरना २.4 किमि छ, त्यसोभए तपाइँले यसलाई एक राउन्ड-ट्रिप दिन वृद्धिमा अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ. को पैदल यात्रा निशान सुरु हुन्छ र उम्हासेनको शहरमा पार्कि lotमा समाप्त हुन्छ.
अष्ट्रियामा अवस्थित सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, उच्च Tauern राष्ट्रीय पार्क, Krimml झरना एक तीन-स्तरीय झरना हो, पुगन 1490 मी उचाई मा र 380 मी उच्च. प्राचीन जंगल, जीव, रातो हिरण, र सुनहरी चीलहरू पार्कका बासिन्दाहरूमध्ये केहि हुन् जुन तपाईंसँग युरोपमा अर्को अचम्मको झरनाको बाटोमा बाटोहरू पार गर्दछन्।. तपाईं यदि एक शिविर उत्साही र अनुभवी हाइकर, यो पार्क र Krimml झरना अस्ट्रिया उच्च पहाडहरु मा एकदम अविस्मरणीय साहसिक हुनेछ.
हरियो घाँटीमा अवस्थित, फ्रान्स मा उच्च Gavarnie झराहरू छन् 422 मिटर अग्लो र धेरै पर्यटकहरु बीच. Hautes Pyrenees को दृश्यको साथ, गवर्नी झरना दुबै रोमान्टिक र गम्भीर पदयात्रीहरूको लागि उपयुक्त छ जुन अन्वेषण गर्न र जीत गर्न चाहान्छ फ्रेन्च पायरेनीस. गवर्नी झरना मात्र हो 40 मिनेट ड्राइभ गाभर्नी गाउँबाट.
युरोप सपनाको गन्तव्य हो एकल यात्री र परिवारका लागि. यो युरोपभरि यात्रा गर्न धेरै सजिलो छ र हाम्रो सूचिमा सबै राम्रा झरनाहरू ट्रेन वा बस द्वारा धेरै पहुँचयोग्य छन्, लागि दिन-यात्रा वा शिविर, अनुभवी यात्रीहरू वा शुरुवातकर्ताहरूको लागि जो साहसिक महसुस गर्दैछन् र युरोपको प्रकृतिको उत्तम अन्वेषणको सपना देख्छन्.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 युरोपमा सबैभन्दा सुन्दर झरना” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/e એમ્બેડ/https://www.saveatrain.com/blog १० اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel रेल यात्रा traintravelfrance travelgermany Travelingtips यातायात स्विट्जरल्याण्ड झरनाहरु झरनाइयुरोप